Zeziphi iimpawu ikhompyutha esisebenza nazo ekufuneka sinazo? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Zeziphi iimpawu ikhompyutha esisebenza nazo ekufuneka sinazo?
Omnye isixhobo somsebenzi ophambili kuyilo ngalinye lomzobi, ngaphandle kwamathandabuzo, yikhompyuter yabo. Ukuba awukabinayo, sele uza kuyitshintsha okanye ufuna ukuyiphucula le sele unayo, kuya kufuneka ubenezi ngcebiso zokuba ungayikhetha njani eyona khomputha ilungileyo ikhoyo.
Zeziphi izinto ekufuneka ikhompyuter yakho ibenazo, ukuze ibe yeyona ilungileyo xa usebenza ngeeprojekthi zoyilo lwakho?
1 Khetha olona khetho
2 Masiqale ngokumisela ukuba sikhethe ntoni, nokuba yiPC okanye iMAC
3 Yeyiphi engcono ukusebenza, ilaptop okanye idesktop?
Khetha olona khetho
Ayingomsebenzi olula ukukhetha olona khetho luqwalasele ukuba izixhobo yiPC okanye iMAC Kuya kufuneka ubenesakhono esifanelekileyo ukuze ukwazi ukuphatha iinkqubo ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa ngokutyibilikayo ukuba wonke umyili usebenzisa, oko kukuthi, Ifotohop, uMzobi, uCorel, njl., ngakumbi kuba kuqhelekile ukusebenza nabaliqela ngexesha elinye.
Masiqale ngokumisela ukuba sikhethe ntoni, nokuba yiPC okanye iMAC
Namhlanje, ubukho bezixhobo zekhompyuter ezinxibelelana neWindows lolunye uhlobo olubalaseleyo olwenza amakhadi emizobo aluncedo afumaneke phantse kuye nawuphi na umsebenzisi kwaye Ndibe sisixhobo esikhulu Nawuphi na umyili okhuphisana ngokutyibilikayo ne-MAC ukuza kuthi ga ngoku ongakhange athi thaca uhlaziyo olubavumela ukuba babe ngaphambili, mhlawumbi ngo-2018 xa iMac Pro yabo ithenjisiweyo isemarikeni, singathetha ngezinye iindlela kwakhona.
Yeyiphi engcono ukusebenza, ilaptop okanye idesktop?
Nangona ikhompyuter yedesktop ithatha indawo ethe chatha, ibonelela umsebenzisi ngenkqubo yokupholisa engcono, zinokuguquguquka ngakumbi xa kufikwa kumba wokuphinda uzilungelelanise kwaye zisebenza ngokukhawuleza, ngenxa yezi zizathu ikhompyuter yedesktop yeyona nto unokukhetha kuyo.
IiLaptops ezisebenza kwindawo yoyilo ziphucule kakhulu kwaye zibonelela ngezibonelelo ezilungileyo kakhulu kumsebenzisi, oko kuthetha ukuba kancinci kancinci lo mahluko phakathi komnye nomnye uncitshisiwe.
Ubuncinci ekufuneka ikhompyuter ibenabo, ngu IMAC okanye iPC, into yokuqala yeyiphi iprosesa onayo ukusukela oko ichaza amandla kunye nokusebenza kwezixhobo zakho, Intel Core i7.
I-RAM yeyona yesibini ibaluleke kakhulu, ubuncinci obufunekayo yi-8 GB, eyona ilungileyo eyi-16 GB kwaye ubuninzi buya kuba yi-32 GB, i-RAM ngakumbi, isidingo esincinci sokusebenzisa idiski enzima kuya kubakho
Idiski enzima, eyona ibalulekileyo koku ingaphaya komthamo wayo olungileyo ngokubanzi, luhlobo lwehard disk apho kulapho kucetyiswa khona SSD ukususela ngoku ubuchule bokuphucula ukusebenza kweqela.
Indima ye Ikhadi lemifanekiso Kubaluleke kakhulu kuba iqhubekeka idatha ethunyelwe yiprosesa kwaye iyiguqulele kulwazi oluqondakalayo kwiscreen sekhompyuter yakho. Ezona mveliso zilungileyo zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunye namaxabiso I-NVIDIA kunye ne-AMD.
Ngokufanelekileyo, ukubek'esweni kuya kufuneka kube ne- Isisombululo esihle kwaye ivumela ulungelelwaniso oluhle kwimibala, ethembeke kangangoko kunokwenzeka kuba yinto ebalulekileyo kuyilo lwegraphic, ukuba indawo yombala yoku yenziwe kwi-RGB iya kuba ilungile.
Imouse, fumana enye efanelekileyo ngokufanelekileyo isandla kwaye ikhululekile.
Iphedi yemouse, ukunqanda izifo kunye nokukhula kwezifo ezinxulumene nokusetyenziswa rhoqo kwemouse, kukho ezinye kwintengiso iimethi ezikhethekileyo ze-ergonomic ukuxhasa isihlahla kunye nokuphepha.
Ikhibhodi kufuneka ikhululeke kwaye nangona zininzi iindlela onokukhetha kuzo kwintengiso, mna ungongeza idesktop efanelekileyo yePC ukuze yonke into ibe kwinqanaba elichanekileyo kwaye izifo zasemsebenzini zithintelwe ekuhambeni kwexesha.
Okokugqibela, kuyacaca ukuba ngaphandle kwezixhobo ogqiba ukuzisebenzisa Ezi ngcebiso ziya kukunceda uthathe esona sigqibo silungileyo ngokusekwe kwiimfuno zakho.Into ebalulekileyo kuyilo ngamandla ekhompyuter kunye nokuthembeka kombala kwisohlo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Zeziphi iimpawu ikhompyutha esisebenza nazo ekufuneka sinazo?
Olu lwazi lubonakala lilinganiselwe kum. Inika phantse akukho ngcebiso ingaphaya kwengqiqo.
Unyanisile malunga nezibonelelo zenqaba, kodwa ukuba uyilo lomsebenzi wakho ufuna ukuhamba kakhulu, ufuna ilaptop.
Ngaphakathi kwi-i7 kukho iimodeli ezininzi. Ndiyaqonda ukuba awufuni ukuba ngqo kodwa kubonakala kum ukuba uhlala uyikhumbula; Ndihlala ndisiva abantu besithi bathenge i7 ngexabiso lokufumana isithembiso xa sisisizukulwana esidala kwaye senza kakubi kune-i5 yangoku okanye i3. Ngendlela, ii-i5s nazo ziqhuba kakuhle kwimisebenzi yoyilo kuhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo.
Ngokwenyani ungabeka i-RAM eninzi kune-32GB, kodwa ewe, okwangoku nge-32GB kuninzi. Ngokuphathelele "i-RAM engaphezulu, isidingo esincinci sokusebenzisa idiski apho" akubonakali kuchanekile.
Yonke imizobo (i-chip) zii-AMD okanye i-NVIDIA, loluphi utshintsho oludibeneyo. Akukho modeli isikhokelo okanye uphawu lunikiweyo.
Ayijongiswanga nge-intshi, isisombululo okanye iintlobo zepaneli ezicetyiswayo zoyilo (IPS).
Andifuni ukukhubekisa ngokugxeka kwam kodwa kubonakala ngathi kum olu lwazi lwanele ukukhokela kakuhle ekuthengeni izixhobo zoyilo.
I-Vitae yeKharityhulamu yaBayili beMizobo: Ubugcisa boqobo
Abona badali beelogo bakwi-Intanethi